Fitempon’ny Tontolom-bolongana Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Ny tontolom-bolongana Saodiana tamin'ny herinadro voalohany tamin'ny volana May 2006
Voadika ny 01 Avrily 2019 12:48 GMT
Ndeha hatombontsika amin'ny fandrakofana an'ireo media iraisam-pirenena mikasika an'i Arabia Saodita ny famintinantsika an'ity herinandro ity, izay nisarika ny sain'ireo blaogera marobe. Mandefa fanehoankevitra iray i Mansur tao anatin'ny tantara iray an'ny tranonkala an'ny BBC. Milaza izy hoe:
Mba karazana Deputy Minister inona re no hizara ity karazam-baovao miaraka amina namana iraka avy ao amin'ny BBC ity? Manamafy izy fa ireo no “taona tsara indrindra teo amin'ny fiainany” rehefa “niray trano tamin'ireo vehivavy roa mifanambady” izy”. Tokony ho menatraity minisitra lefitra ity rehefa notendrena !
Nandritra io fotoana io, nandefa tantara iray novakiany teo amin'ny LA Times mikasika an'ireo Shiites i Saudi Future manao hoe: “Misaotra anareo ry media amerikana, noporofoinareo fa manan-tsaina ianareo, mahafantatra betsaka mikasika an'ireo faritra Saodiana, sy ireo vahoakany. Ary indrindra indrindra amin'izany, tsy maao fanasàna atidoha ianareo!” hoy izy nanoratra. Manana lahatsoratra iray hafa ihany koa izy mikasika ny tsy firaharahan'ireo media amerikana rehefa olana Saodiana no resahana.
Ny zon'ireo vehivavy no tena zava-manahirana goavana ho an'ireo Saodiana blaogera, ary tamin'ity indray mitoraka ity, tezitra i Ruba raha nahalala ny antony tsy ahafahan'ireo vehivavy mifidy. “Amin'izao andro izao, tsy misy ataon'ireo Silamo mpitondra afa-tsy ny manimba ny endriky ny Silamo sy manararaotra ny adelh (sunnah sy Quran). Ary tsy mbola fantatro foana hoe nahoana isika no tsy afaka mifidy” Mila fialantsiny tena mitombina aho.” Mihevitra izy fa tsy tokony ho avelantsika alain'ny olona sy ovain-dry zareo araka izay irian'izy ireo sy izay mety amin'izy ireo ny Silamo . “Diso izany”, hoy izy nanampy.
On another issue, Ubergirl has an interesting post comparing the reaction of Saudis to the Danish cartoons and what's going on in Darfur. She says: ……………………Mikasika ny olana iray hafa, nandefa lahatsoratra iray maha liana i Ubergirl izay mampitaha ny fihetsik'ireo Saodiana amin'ireo sary mahatsikaiky sy amin'izay mitranga ao Darfour. Milaza izy hoe:
Tao anatin'ny iray volana monja, olona tokana monja no reko (fotoana fohy) niresaka an'izay nitranga tao Darfour. Tao anatin'ny roa andro monja, in-diminjato miverina no nahenoanao resaka mikasika an'ireo sariitatra voaozona. Tsy lazaina intsony ireo sary mandraiki-tena (autocollants). Olona 300.000 no maty tao Darfour hatramin'ny taona 2003. Matin'ny hanoanana avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Lehilahy iray tao Afganistana no maty nandritran'ny fandraisany anjara tamina fihetsiketsehana nitakiana ny governemanta danoà mba hiala tsiny ampahibemaso mikasika an'ireo sariitatra. Heverin'izy ireo fa mbola mila faty betsaka kokoa ve izao tontolo izao? Ahoana no lavitra ahy ireo olona matory amin'ny alina ireo.
Ndeha hivadika resaka teknolojia isika, izay hitanjozoran'ireo fanehoankevitra tsy mahomby ataon'ireo mpitsidika ny Gitex Riyadh. Mihevitra i Herbaz fa mihahenjana isan-taona ny fampirantiana. “fampirantiana tena mahatsikaiky sy ratsy fikarakaràna indrindra”, hoy ny nambarany. Mihevitra izy fa tsy misy ifandraisany amin'ny Gitex Dubai niaingàna mihitsy ilay fampirantiana, afatsy ny anarany. “Te-hilaza aho fa ho ataoko ankivy ny Gitex Riyadh amin'ireo taona ho avy rehetra”, hoy izy nanampy. “Tsy fampirantiana mihitsy io, fa fanesoana”, hoy ny nambaran'i Fouad Al Farhan. “Angamba mety ho nahomby kokoa izy raha toa ka navadik'izy ireo ho tsena fivarotana legioma”, hoy izy nanampy.
Fiverenana amin'ny politika, tsy fantatr'i Aya na te-hitomany izy na te-haneso amin'ilay lazaina fa “fahamendrehan'ny rafitra ara-pitsarana Saodiana”. “Angamba izy roa miaraka!” hoy izy nanampy. Nandritra izay fotoana izay, ninoany fa “ny governemanta Saodiana dia andalam-pankatoavana ny dika nataony ho an-dry zareo tamin'ilay lalàna telo mahabe adihevitra momba ny fitokonana”.
Lavitry ny politika, nahavita namaky ny Andro Talata iarahana amin'i Morria i DiDi, ary noheveriny fa tsara ihany ilay boky. Hoy izy hoe:
Miresaka an'izao tontolo izao izy, mahatsapa sorena amin'ny tenany, manenina, ny fahafatesana, ny fianakaviana, ireo fihetsehampo, ny tahotra ny fahanterana, ny vola, ahoana no fizotran'ny fiainam-pitiavana, ny fanambadiana, ny kolontsaina sy ny famelàn-keloka. Ny fotoana iray anisany tena navesatra dia rehefa iny izy niresaka ny fahafatesana iny, toy ny tena azo tsapain-tanana ary feno fahendrena.
Farany, ndeha ho faranantsika amin'ireto lahatsoratra roa ireto ny fitsidihantsika ny faravodilanitra : manao jery todika ny lasa i Dotsson. Betsaka tamin'ireo zavatra niainany tany Etazonia no mampanembona azy. “Malahelo ny afomanga tamin'ny 4 jolay aho. Malahelo ny fandehanana tany IMAX,” hoy izy. Ary manoratra tsikera mikasika an'ireo tranonkalam-baovao amin'ny teny Arabo i Mohammed Al Rehaili (teny Arabo), ary mihevitra fa ny Al-Arabiya.net no mendrika indrindra. “Mahazaka RSS izy ireny ary lafatra ny fifandrimbonana akaiky ataon'izy ireo,” hoy ny nambarany.